April 2020 - Alinnpya
၉ တန်းကျောင်းသူလေးကို အမည်မသိအမျိုးသားတစ်ဦးမှ မေ့ဆေးဖြင့်ရိုက်ပြီး ခေါ်ယူမှုဖြစ်ပွား
April 30, 2020 AlinnPya Comments Off on ၉ တန်းကျောင်းသူလေးကို အမည်မသိအမျိုးသားတစ်ဦးမှ မေ့ဆေးဖြင့်ရိုက်ပြီး ခေါ်ယူမှုဖြစ်ပွား
#သတိရှိကျပါနော် မိုးညို့မြို့နယ်၊ ဝဲကြီးအုပ်စု၊ ကြီးပင်တက်ကျေးရွာမှကောင်မလေး (၉)တန်းကျောင်းသူကို အမည်မသိအမျိုးသားတစ်ဦးမှ မေ့ဆေးဖြင့်ရိုက်ပြီး ခေါ်ယူသွားသဖြင့် ဝိုင်းလိုက်ကြရာ အမျိုးသားမှထွက်ပြေးသွားပါသည်။ ၂၉ ၄ ၂၀၂နေ့ ၃နာရီအချိန် Credit©Sh Sh လူတိုင်း မသိမဖြစ်သော တို့ဆေး အန္တရာယ် အကြောင်း (လူတိုင်းဖတ်ရန် သတိထားရန်) ယခုတလော ပြည်တွင်းမှ ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းများက တို ့ဆေး များသုံး၍ လုရက်မှု-မုဒိန်းမုှခလေး ငယ်များအား တို ့ဆေးသုံးလျှက် ဖမ်းဆီးခံရသည့် သတင်းများ […]
မန္တလေး ရတနာတိုင်​းပြည်​တိုက်​တန်​းမှာ နိုင်ငံခြားသား သေဆုံးနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်
April 30, 2020 AlinnPya Comments Off on မန္တလေး ရတနာတိုင်​းပြည်​တိုက်​တန်​းမှာ နိုင်ငံခြားသား သေဆုံးနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်
၂၉.၄. ၂၀၂၀ ရက်​​နေ့ မွန်​းလွဲ ၁ နာရီ ၁၇ မိနစ်​ အချိန်​ မန ္တ​လေးမြို အကွက် ၈၂၂​ , ၆၀ , ၆၂ လမ်​း ၃၈ – ၃၉ ကြား ရတနာတိုင်​းပြည်​တိုက်​တန်​း ပထမ ထပ်​ အခန်း ​A/14 တွင်​ဌားရမ်​း​နေထိုင်​​သော အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား ​​Mr . Jade ​သေဆုံး ​နေသည်​ကို​တွေ့ရှိရပါသည်​။၎င်းးဖြစ်​နှင်​့ပါသတ်​၍ မြန်​မာနိုင်​ငံ […]
ပျောက်ကင်းသူ (၁၁)ဦးတိုး ပထမသုတ် (ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် မရှိပါ)
April 29, 2020 AlinnPya Comments Off on ပျောက်ကင်းသူ (၁၁)ဦးတိုး ပထမသုတ် (ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် မရှိပါ)
ကိုဗစ် ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ၌ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်)မှ (ပထမသုတ်) အဖြစ် စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော အသွားအလာကန့်သတ်ခံရသူ နှင့် စောင့်ကြည့်လူနာ (၈၉) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော စောင့်ကြည့်လူနာ (၂၁) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများ၊ စုစုပေါင်း (၁၁၀)ခုတို့တွင် – • ကိုဗစ် ရောဂါပိုး မတွေ့ရှိပါ။(ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် […]
သေဆုံးနေသော နိုင်ငံခြားသားမှာ ၃ ရက်တိတိ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရ
April 29, 2020 AlinnPya Comments Off on သေဆုံးနေသော နိုင်ငံခြားသားမှာ ၃ ရက်တိတိ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရ
ယနေ့ ၂၉ , ၄ , ၂၀၂၀ ရက်နေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ် အချိန် မန ္တလေးမြို့ ၆၂ လမ်း၃၈ ၃၉ ကြား ရတနာတိုင်းပြည်အိမ်ယာ ဒုတိယထပ်ရှိအခန်း A/14 တွင်နေထိုင်သူနိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးအခန်းတွင်း၌သေဆုံးနေ ယခု ရဲတပ်ဖွဲ့များနှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမူးတို့အဖြေသိရှိရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ် မှတ်ချက် ။ သေဆုံး နေသော နိုင်ငံခြားသား မှာ( ၃ ) ရက်တိတိ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရ။ Ko […]
April 29, 2020 AlinnPya Comments Off on ကန္ေတာ္နဒီမွ တာဝန္က် ဆရာတစ္ဦး၏ ရင္ဖြင့္သံပါ
ကန္ေတာ္နဒီမွ တာဝန္က် ဆရာတစ္ဦး၏ ရင္ဖြင့္သံပါ ကန်တော်နဒီအကြောင်းပြောရရင် ဆရာဝန် ဆရာမတွေကို အလှူရှင်တွေက ကျွေးထားတာပါ ၊ Ppe,mask,hand gel ကအစ အားလုံးပြည်သူတွေရဲ့အလှူကြောင့်ရပ်တည်နိုင်တာပါ ရေကိစ္စပြောရင် ဆရာဝန် ဆရာမအခန်းရော လူနာတွေခန်းရောက ကန်တခုထဲကပဲလာတာပါ၊ ပြောရရင် လူနာတွေရေပြတ်ရင် ဝန်ထမ်းတွေလဲပြတ်တာပဲ ၊ အောက်ကန်ရေပြည့်မှ အပေါ်ကန်တင်လို့ရတာပါ၊ risk ယူပြီးတင်လို့မော်တာပျက်ဖူးပါတယ် ၊ ပြတ်တာလဲ ခဏပါ၊ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ အမြန်ဆုံးလုပ်ပေးခဲ့တာပါပဲထမင်းကိစ္စပြောရရင် လူနာက သူ့အိမ်က ပို့တာစားတာပါ၊ […]
April 29, 2020 AlinnPya Comments Off on သင့်ရဲ့ကံကြမ္မာ အဆိုးအကောင်းဟောကိန်း
ပုံတွေအားလုံးကိုသေချာကြည့်ပြီးမှ မျက်လုံးထဲမှာ အကြိုက်တွေ့ဆုံး တံခါးပေါက်၊ သင်လျှောက်သွားလိုတဲ့တံခါးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြည့်လိုက်ပါ ပြီးလျင် သင်အကြိုက်ဆုံးတံခါးတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါနံပါတ်လေးမှတ်ထားပါ ပြီးလျင်ဆိုင်ရာအဟောကိုရှာဖတ်ကြည့်ပါ 1 လွတ်လပ်မှုသို့ထွက်ပေါက် သင်ဟာ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ လွှမ်းမို့မှု၊ အမိန့်ပေးစေခိုင်းမှုတွေကို မနှစ်မြို့ဘဲ မိမိစိတ်တိုင်းကျ ကိုယ်ယုံကြည်ရာလမ်းကို လျှောက်လှမ်းလိုသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ကိစ္စတစ်ခုကို ကမန်းကတမ်းလုပ်ကိုင်ရခြင်းကို မနှစ်ခြိုက်ဘဲ အချိန်ယူလုပ်ဆောင်တတ်သူဖြစ်တယ် စိတ်စွမ်းအားပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြိီး အောင်မြင်မှုများ ရရှိနေမည်။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပြီး၊ သူတစ်ပါး အပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိသူလည်းဖြစ်သည် လူအများ ၏ […]
သင် (သို့) သင့်ချစ်သူ နှုတ်ခမ်း တစ်ဝိုက်မှာ” မှဲ့” ရှိခဲ့ရင်
April 29, 2020 AlinnPya Comments Off on သင် (သို့) သင့်ချစ်သူ နှုတ်ခမ်း တစ်ဝိုက်မှာ” မှဲ့” ရှိခဲ့ရင်
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူ အများစုဟာ သနားစရာ၊ ချစ်စရာ အလွန် ကောင်းကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အပြင်ပန်းမှာ ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းတယ် ထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ် သဘောထားကတော့ အလွန် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ပါတယ်? ပွစိပွစိလုပ်တာကတော့ ဝါသနာပါ သူများကို ကူညီလိုက်လို့ ကိုယ့်မှာ သုညဖြစ်သွား ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့သူ အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင် ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ သူတွေပါ။ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ စေတနာလည်း အရမ်းကောင်းသလို […]
ချင်းအမျိုးသမီး အသတ်ခံရ တရားခံမှာ အခန်းဖော်သူငယ်ချင်း ၏ရည်းစားဖြစ်နေ
April 29, 2020 AlinnPya Comments Off on ချင်းအမျိုးသမီး အသတ်ခံရ တရားခံမှာ အခန်းဖော်သူငယ်ချင်း ၏ရည်းစားဖြစ်နေ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟန်းမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးးအသတ်ခံရကြောင်း သိရပါသည်။ ထိုအမျိုးသမီးမှာ မိုင်အေးအေးသိန်း(ဇာတိ ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့နယ် ရူးအုပ်စု ၊ရူးချင်းကျေးရွာ) ဖြစ်ပြီး (၂၃.၄.၂၀၂၀) ရက်၊ နေ့လယ်(၂)နာရီခန့်ကသူမ၏ နေအိမ်အခန်းတွင် ရုတ်တရက် သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါသည်။ (23.4. 2020) ရက်နေ့၊ နေ့လည်2:00 pm အချိန်ခန့်တွင် အဆောင်တူနေသောသူငယ်ချင်းအမျိုးသမီး အလုပ်မှ ပြန်ရောက်သောအခါ ဦးခေါင်းညိုမဲဒူးခေါင်း ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာများဖြင့်သေဆုံးနေသောမအေးအေးသိန်း ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အမှုဖြစ်စဉ်ကို ဗဟန်း ရဲစခန်းသို့အကြောင်းကြားပြီးဗဟန်းမြို့မရဲစခန်း နှင့် ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးမှုးခင်းဆရာဝန်ကြီး […]
အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် မယားပါသမီးကို ပထွေးမှ မုဒိန်းကျင့်မှုဖြစ်ပွား
April 29, 2020 AlinnPya Comments Off on အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် မယားပါသမီးကို ပထွေးမှ မုဒိန်းကျင့်မှုဖြစ်ပွား
#Hlegu_News_Update 29.4.2020 အသက်(၁၄)နှစ်အရွယ်မယားပါသမီးကိုပထွေးမှ မုဒိန်းကျင့်မှု 27.4.2020 ရက်နေ့19:30အချိန်လှည်းကူးမြို့နယ်ဘားလားကျေးရွာတွင်ပထွေးဖြစ်သူမှမယားပါသမီး(14)နှစ်အား သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်မူဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့သူမောင်32နှစ်ယခင်အောင်လံမြို့နယ်ရွာထောင်ကျေးရွာနေခဲ့ပြီးဘားလားကျေးရွာသိုပြောင်းရွှေလာရောက်နေထိုင်သူအားလှည်းကူးမြို့မရဲစခန်းမှဖမ်းဆီးပြီးပြစ်မူဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ 376 ဖြင့်အမူဖွင့် အရေးယူထား ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ #လှည်းကူးငါးပိချက် Credit – Zin Moe အသက္(၁၄)ႏွစ္အရြယ္ မယားပါသမီးကို ပေထြးမွ မုဒိန္းက်င္႔မႈျဖစ္ပြား #Hlegu_News_Update 29.4.2020 အသက္(၁၄)ႏွစ္အရြယ္မယားပါသမီးကိုပေထြးမွ မုဒိန္းက်င္႔မႈ 27.4.2020 ရက္ေန႔19:30အခ်ိန္လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ဘားလားေက်းရြာတြင္ပေထြးျဖစ္သူမွမယားပါသမီး(14)ႏွစ္အား သားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္မူျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔သားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္ခဲ့သူေမာင္32ႏွစ္ယခင္ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ရြာေထာင္ေက်းရြာေနခဲ့ၿပီးဘားလားေက်းရြာသိုေျပာင္းေရႊလာေရာက္ေနထိုင္သူအားလွည္းကူးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဖမ္းဆီးၿပီးျပစ္မူဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ 376 ျဖင့္အမူဖြင့္ အေရးယူထား ေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။ #လွည္းကူးငါးပိခ်က္ Credit […]